Madaxweyne Xasan Sheekh oo hadal aan caadi ahayn kasoo saaray xildhibaanadii la dhaariyay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Xasan Sheekh oo hadal aan caadi ahayn kasoo saaray xildhibaanadii la dhaariyay
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadal aan caadi ahayn kasoo saaray dhaarinta maalintii shalay la dhaariyay xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
Wuxuu madaxweyne Xasan Sheekh sheegay in Soomaaliya ay haatan ka baxday marxaladii kala guurka aheyd, islamarkaana ay yeelatay baarlamaan rasmi ah.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa hambalyo u diray xildhibaanada cusub ee labada Aqal oo maalintii shalay lagu dhaariyay xarunta ciidanka booliska Jeneraal Kaahiye ee magaalada Muqdisho.
“Soomaaliya way ka gudubtay marxaladii kala guurka aheyd, waxaa haatan bilawday cusub waa cusub, waxaa hambalyo leeyahay xildhibaanada labada Aqal ee la dhaariyay” Sidaasi waxaa yiri madaxweyne Xasan Sheekh.
Dhinaca kale, madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ku dooday in sanadkaan doorashooyinka ka dhacay dalka ay ka wanaagsaneyd doorashooyinka ka dhacay dalalka qaar ee ku yaala caalamka, isagoona dhinaca kale qiray inay jireen cilado iyo gaabis meelaha qaar ka dhacay.
Xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka cusub Soomaaliya oo intiisa badan maalintii shalay la dhaariyay ayaa looga fadhiyaa inuu dhameystiro howlaha doorashada oo weli meel qabyo ah maraaya.
Si kastaba ha ahaatee, hadalkaan kasoo yeeray madaxweyne Xasan Sheekh ayaa micnihiisu yahay in haatan awoodda dalka ay ku wareegtay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labada Aqal, waxaana xildhibaanadaasi looga fadhiyaa inay ku dhawaaqaan xilliga kama dambeyska ah ay dhaceeyso doorashada madaxweynaha iyo tan guddoonka labada Aqal ee baarlamaanka.